VIDEO :- Maxaa sameyn laheyd hadaad aragto qof muslim ah oo jidka ku tukanayo oo lagu xadgudbayo? - Hablaha Media Network
VIDEO :- Maxaa sameyn laheyd hadaad aragto qof muslim ah oo jidka ku tukanayo oo lagu xadgudbayo?
HMN:- Laba wiil saaxiibo ah ayaa sameeyay tijaabo bulsho si ay u arkaan jawaabaha ay dadka British-ka ahi ka bixinayaan haddii ay arkaan qof Muslim ah oo jidka dhexdiisa ku tukanaya sida ay ugu jawaab celinayaan dadka xadgudubyada afka ah u geysta muslimiinta wadooyinka ku tukada.
Kennedy Clink, oo 20 jir ah, ayaa weerar afka ah ku qaaday saaxiibkiis Fahim Miah, oo wadada dhexdeeda ku tukunaya, isagoo u geysanaya xadgudub dhanka afka ah, kuna tilmaamayo inuu yahay argagixiso iyo erayo balse ah madalaad uun.
Ilaa afar goobood oo bartamaha magaalada Cardiff ayey tijaabadan ku sameeyeen si ay u arkaan in dadweynaha ay soo dhexgalayaan iyo jawaabaha ay ka bixinayaan.
Tijaabada muuqaalka ee Clink iyo saaxiibkiis Miah, ay sameeyeen ayaa natiijadii kasoo baxday noqotay mid wanaagsan markii ay dadkii goobta ka dhawaa ay ka fal celiyeen handadaada iyo xadgudubka madaladaada uu sameynayay Clink, waxayna dadkii ka fal celiyay ay jawaabtoodu noqotay in UK ay tahay wadan xor ah, qof walbana wuxuu doono uu sameyn karo, xaqna u leeyahay inuu tukado qofka Islaamka ah.
Labadan wiil oo Muslim ah ayaa ujeedada ay ka lahaayeen aheyd in dadka aan Muslimka aheyn iyo Muslimiintaba is dhex geli karaan, Muslimiintana aan fikrada xun ee warbaahinta ka baahisay mid ka duwan ay ku arkayeen tijaabadaan.